श्रीमतीले छोडपत्रका लागि दवाव दिएपछि विराटनगरका डाक्टर शाहले गरे ८ तलबाट कुदेर आत्महत्या – Naya Kura Daily
श्रीमतीले छोडपत्रका लागि दवाव दिएपछि विराटनगरका डाक्टर शाहले गरे ८ तलबाट कुदेर आत्महत्या
September 5, 2020 811
एजेन्सी । भारतको हरियाणास्थित मेदान्त अस्पतालमा कार्यरत नेपाली चिकित्सक सुजितकुमार साहको निधन भएको छ । ३९ वर्षीय साहको मंगलबार एउटा अपार्टमेन्टको आठौं त-लाबाट ख’सेर निधन भएको हो ।
पारिवारीक श्रोतका अनुसार डा. साह मंगलबार बिहान गुरुग्रामस्थित सेक्टर ४७ स्थित उनी बस्दै आएको अपार्टमेन्टको आठौं तल्लाको कौसीबाट ख’सेका थिए । कौसीबाट ख’सेका साहको अवस्था निकै नै ग’म्भीर थियो । ग’म्भीर अवस्थामा घाइते भएका साहलाई तत्कालै नजिकैको मेदान्त अस्पताल पुर्याइएको थियो । तर, अस्पताल पुर्याईएका साहलाई चिकित्सकले मृ’त घोषित गरि दिए ।
पारिवारिक स्रोतका अनुसार प्र्रहरीले प्रारम्भिक छानबिनमा चिकित्सक साहले आठौं तलाबाट हा’म फा’लेर देहत्याग नै गरेको बताएको छ । यद्यपि श’वको पोस्टर्माटम हुन बाँकी रहेकाले प्रहरीले निधन को कारण निर्क्यौल गर्न भने बाँकी छ ।
विराटनगर निवासी डा. साह विगत चार वर्षदेखि मेदान्तमा लिभर ट्रान्सप्लान्ट युनिटमा कन्सल्ट्यान्टका रुपमा कार्यरत थिए । डा. सुजित अर्पाटमेन्टमा एक्लै बस्दै आएका थिए । उनको पश्चिम बंगालकी एक चिकित्सकसँग नै विवाह भएको थियो । डा. सुजित सोमबार साँझसम्म पनि मेदान्त अस्पतालमा ड्युटीमा थिए । र, सहकर्मीहरुका अनुसार उनी त्यसदिन पनि अन्य दिनजस्तै सामान्य अवस्थामा थिए ।
पारिवारिक स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय साह र उनकी श्रीमतीबीच दम्पतीबीच राम्रो सम्बन्ध नभएको र श्रीमतीले छोडपत्रका लागि द’बाब दिँदै आएकी थिइन् । त्यही द’बाबले उनलाई देहत्याग गर्ने परिस्थितिमा पुर्‍याएको आशंका साह परिवारले गरेको छ । मृतक साहको परिवारले पनि उनलाई देहत्याग गर्न बा’ध्य पारिएको भन्दै छानबिनको माग गरेको छ ।
Prevघर बनाउँदा यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्, सँधै लक्ष्मीको बास हुनेछ
Nextचर्चित सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको आज जन्मदिन: यस्ता छन् धेरैलाई थाहा नभएका उनका जीवनका आरोह अवरोह ! Happy Birthday Rabi Lamichhane🎂🎂👏🎁🎈🎊🎉🎀